မိတ်ကပ် Brushhes Set - တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဘာလဲ။ | Bezzia
မိတ်ကပ်ဖြီး: တစ် ဦး ချင်းစီကဘာလဲ?
Susana godoy | 14/07/2021 12:00 | လှပမှု
El က de brochas က de maquillaje ထား ဒါဟာငါတို့မမေ့နိုင်သောထုတ်ကုန်များနောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်ပါသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းတွင်ပါဝင်သောစုတ်တံတစ်ခုစီသည်မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲမသိဘဲမှန်ပါသည်၊ သို့သော်ယခု မှစ၍ သင်သေချာပေါက်သေချာပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့မှန် အချို့သောစုတ်တံများကိုကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချို့မှာပိုမိုတိကျသောအလုပ်ရှိကြသည်တစ် ဦး ထက်ပိုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်နှင့်အတူ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအထူးကိရိယာများပေးရမည့်နည်းစနစ်အားလုံးကိုသင်သိရမည်။ သံသယများကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်ရှင်းလင်းသလား။
1 မိတ်ကပ်ဖြီး: မိတ်ကပ်အမှုန့်လျှောက်ထားရန်ဘာတွေလဲ?
3 eyeshadow လျှောက်ထားဘို့စုတ်တံ
မိတ်ကပ်ကိုယ်နှိုက်နှင့်အမှုန့်နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြီးတစ်မျိုးနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာပိုကြီးတဲ့ brush တွေကိုပိုကြီးတဲ့နေရာတွေမှာရည်ရွယ်ထားတာကိုသင်သိသင့်တယ်။
သူတို့တွင်ကျွန်မတို့သည်ဒါခေါ်ခံရသည် ကူကီ။ ဒါဟာ rounded finish ကိုရှိပြီး၎င်း၏လက်ကိုင်ရှည်လျားသောမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးနှင့်အမှုန့်မိတ်ကပ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆိုပါစကစ်ဖြီး သူမ၏ဆံပင်သည်ယခင်ဆံပင်ထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်ပြီးအလွန်သိပ်သည်းသည်။ အရည်နှင့်အမှုန့်မိတ်ကပ်များသည်သင့်ကိုမဆီးတားနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သဘာဝနှင့်ဒြပ်ဆံပင်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်ပြီးအလွန်သဘာဝကျသောအချောကိုချန်ထားလိမ့်မည်။
မိတ်ကပ်လိမ်းရန်အတွက် brush brush သည်အခြားအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမည်ကဖော်ပြသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ယခင်နှင့်ဆံပင်နည်းသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်သဘာဝကျသောအချောသပ်မှုရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည် ပို၍ ယူနီဖောင်းဖြစ်မည်။
ဆိုတာသတိရပါ ဖုံးကွယ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလတ်စားစုတ်တံများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အသားအရေများများစားစားကိုသာဖုံးအုပ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအရေပြားများကိုလိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မဖော်ပြမီ သို့သော်၎င်းသည်မှန်ကန်သောမိတ်ကပ်သည်မိတ်ကပ်ကဲ့သို့ဖုံးအုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောအရွယ်အစားသို့သွားသည်။ ၎င်း၏အစွန်အဖျားများသောအားဖြင့်ပြားသည်, သို့သော်ဖြီးကိုယ်တိုင်ကအတော်လေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အရည်သို့မဟုတ်ခရင်မ်ကဲ့သို့သောဖုံးကွယ်ထားသည့်အမျိုးအစားများကိုအလောင်းအစားပြုလုပ်ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရန်အတွက်မိတ်ကပ်စတိတ်အတွင်းရွေးချယ်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့စကစ်ဖြီးသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာမကအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းအများဆုံးအသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည် အရွယ်အစားအလတ်စားနှင့် Semi-rounded နိုင်ပါတယ်။ သင့်အမှု၌ bevel ရှိပါက၎င်းကိုပိုမိုတိကျသောရလဒ်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ စုတ်တံတွေကို 'toothbrush' လို့ခေါ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသွားတိုက်တံကိုသတိရစေတဲ့အတွက်သူတို့ကိုလည်းမျက်နှာနီရဲအောင်လုပ်နိုင်တယ်။
၄ င်းစုတ်တံအမျိုးအစားများသည်သေးငယ်လေ့ရှိပြီးပိုသိနိုင်သည်။ rounded finish သည်မျက်လုံးမှောင်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နည်းနည်းကြာသောမော်ဒယ်တစ်ခုရှိပြီးထိုအရိပ်များ၏ပေါင်းစပ်မှုကိုအသုံးချပြီးမြင်သာသောခြံများမရှိတော့သည့်အခါ၎င်းသည်မှုန်ဝါးသွားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အနိမ့်အမြင့်ရှုထောင့်အပြင်မီးမောင်းထိုးပြသူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအချိုးမညီသောဖြတ်တောက်ခံထားရသူများ၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အကယ်၍ သင်၏မျက်လုံးကို brush ဖြင့်အသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်ဘောပင်၏အစွန်အဖျားကဲ့သို့အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
အကယ်စင်စစ်သင့်ရဲ့မိတ်ကပ်ဖြီး set ကိုအချို့ရှိပါတယ် မျက်ခုံးစုတ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့အမြဲသတိမထားမိသော်လည်း၎င်းတို့သည်သူတို့၏အရေးပါသောအရေးပါမှုရှိသည်။ ဤကိစ္စမျိုးတွင်နှစ်ထပ်ကတ်များကိုတွေ့ရလေ့ရှိပြီး ၄ င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာပြုလုပ်မည့်combရိယာကိုဖြိုခွဲရန်ဖြီးမျိုးရှိသည်။ အဆိုပါစုတ်တံလည်းဒဏ်ငွေနှင့် beveled ချောဖြစ်လိမ့်မည်။ မျက်တောင်အဘို့, သူတို့အဘို့ရည်ရွယ်တစ်ဖြီးကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုမျှ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်ကျန်ရှိနေသေးသော mascara အစုငယ်များကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။ မင်းမိတ်ကပ်ဖြီးနဲ့တပ်ထားပြီးသားလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » မိတ်ကပ်ဖြီး: တစ် ဦး ချင်းစီကဘာလဲ?
ဓာတ်ပုံဘောင်များ - အိမ်တွင်ပြုလုပ်ရန်အကြံဥာဏ်များ